२०७५ माघ २७ आइतबार ११:२२:००
नेकपामा सचिवालयका नेता ईश्वर पोखरेल पछिल्लो समय मौन छन् । पार्टी र सरकारको कार्यशैलीका बारेमा सन्तुष्ट छैनन्, यद्यपि उनी मुख खोलिहाल्ने पक्षमा भने छैनन् । बाह्रखरीसँगको लामो कुराकानीमा उनले सरकाले ठीक ढंगले लय समात्न नसकेको भनेर आत्मस्वीकारचाहिँ गरे ।
एमालेको आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमा महासचिवमा निर्वाचित भएका पोखरेल पार्टी एकता हुँदा घटुवामा परे । एकताको महाधिवेशनको तिथि वर सर्दैजाँदा उनले सिद्धान्ततः आफूलाई जनवादको कित्तामा उभ्याएका छन् । नेतृत्वका सन्दर्भमा भने ‘पर्ख र हेर’कै सुविधामा छन् उनी ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कार्यदल बनाउँदा पनि हचुवापन त देखियो । ‘ल यसो गरौँ, यसका मान्छे राखिदिऔँ’ भनेर विषयको गम्भीरतालाई पन्छाइयो । तदनुरूप कार्यसम्पादन भएन । यद्यपि कार्यदलका साथीहरू बैठक बसेको सूचना पाएका छौँ । गम्भीरतापूर्वक त्यहाँ छलफल भइ पनि रहेको होला । संगठनात्मक एकीकरणको काम त्यहीँ टुंगिएला ।
तर, एकताकै बेला टुंग्याउनुपर्ने तर त्यसै छाडिआएका विचार, कार्यदिशालगायतका विषयले हामीलाई पछिसम्म पिरोलिरहनेछन् ।
एकतापूर्व हामीले १६५ प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेशसभाको टिकट तयगर्दा निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । एक ढंगले टुंग्यायौँ पनि । परिणाम आउँदा आधारभूतरूपमा सही गरेछौँ । कमीकमजोरी त रहे । असन्तुष्टि पनि नदेखिएका होइनन् । तर, मूलभूतरूपमा हामी सफल भयौँ ।
अहिले पनि जसले जहाँ जिम्मेवारी पाएको छ, वैकल्पिक प्रस्तावका साथ अनौपचारिक कुराकानी गर्ने हो भने समाधान त्यति पर छैन ।
पार्टी अध्यक्षले कहाँ, कुन सन्दर्भमा के भन्नुभयो ? मैले राम्ररी बुझ्न पाएको छैन । समाचारकै आधारमा दृष्टिकोण बनाउनु पनि उचित हुँदैन ।
तथापि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मेटिएर नेकपा बनेको हो । अब, नो मोर युएमएल, नो मोर मावेस्ट सेन्टर । नयाँ ठाउँमा आइसक्यौँ हामी । सबैले आत्मसात गरेकै कुरा हो यो । विगतबाट शिक्षा लिएर उचाइमा आइपुग्यौँ । आफूलाई अद्यावधिक गर्दै अझ कहाँ पुग्नुछ । यसर्थ अपडेटेड हुन नमान्ने हो भने आउटडेटेड हुन्छौँ ।
रह्यो कुरा संघीयताको–
संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी कोही पनि पछाडि फर्कन सक्दैनौँ । त्यो कल्पनासम्म पनि दिवास्वप्न हो । राजनीतिक घोषणा मात्रै होइन, संवैधानिक घोषणा पनि भएर संरचनासमेत खडा भइसक्यो । अब कसरी पछाडि फर्कने ? कसले सोच्न सक्छ त्यो ?
संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा मूलभूत संरचना खडा भए । आधारभूत संरचना र कानुनको निर्माण हुन बाँकी छन् । त्यसले अन्तर्विरोधको स्थिति खडाचाहिँ भएको हो । राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा त भएको छ । तर, त्यो आफैँ मुभ (परिचालित) त हुँदैन । मुभ हुन त कानुतः संरचना चाहियो । कानुनले पूर्णता नपाउञ्जेल अन्तरविरोध देखिन्छ । कानुन तयार नहुञ्जेल केन्द्रले अधिकार आफूतिर तान्न खोज्ला, कहिले स्थानीय तह र प्रदेशको हात बढी बढ्ला । कस्तो भने, हिजोको अभ्यास र आदतले तान्न सक्छ । अहिलेको परिस्थिति र अवस्थाले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छ । तानातानको स्थितिमा समस्याग्रस्त पनि नदेखिने होइन । यसलाई हामीले संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
कानुन र संरचना नबनेकाले नै प्रणाली चुस्त, दुरुस्त हुन सकेको छैन । खुरुखुरु हिँड्न यसैले अल्झाइरहेको छ । अर्को शासन सत्ता परिवर्तन हुँदा यथास्थिति र परिवर्तनकारी शक्तिबीच अन्तरविरोध खडा भएको छ । आदत र अवस्थाबीचको अन्तरविरोध पनि छँदैछ ।
कतिपयक कुरामा लय नमिलेको पनि हुनसक्छ । कहिलेकाँही गायन, शब्द, संगीतका उपकरण राम्रो हुँदाहुँदै पनि लय विशृंखलित बन्न पुग्छ ।
आन्दोलनले नै मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो । मेरो क्रियाशीलता, क्षमता, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको लगावले मलाई जुन भूमिका दिन्छ, त्यहीँ रहन्छु म ।
पार्टी एकताको कोर्ष नै पूरा नभएको अवस्थामा मैले अहिले अतिरिक्त पोजिसनको कुरा गर्नु वाञ्चनीय हुँदैन ।
एमाले छँदा म दुईपटक महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुँ । म पार्टीका सदस्यहरूले मनोनीत गरेको महासचिव थिइनँ । ऐतिहासिक एकताको प्रसंगमा जे चिज भयो, भयो, त्यसलाई चर्चा–परिचर्चा गर्नु यतिबेला अनुपयुक्त हुन्छ । भोलि आवश्यक परेका बखत समीक्षात्मक कोणबाट छलफल गरौँला ।
अतः परिस्थिति कस्तो बन्छ । परिस्थितिले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न म तयार छु ।
तर, आन्दोलनको नाममा, विरोधका नाममा जे–जस्तो मञ्चन गर्न खोजिँदैछ, त्यसलाई बडो गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ । प्रतिपक्षीले जिम्मेवार हुनुपर्छ । जिम्मेवार सत्तापक्ष भनिरहँदा प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रतिपक्षीको कित्ताबाट जे–जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, जे–जस्तो गरिँदैछ, त्यो शोभनीय छैन ।